Astaamaha hudheelada aan lahayn carruur iyo dad waaweyn oo keliya | Wararka Safarka
Dhawaan, hudheellada qaarkood ayaa lagu soo rogay qaab la beddelay hudheelo aan lahayn carruur iyo dad waaweyn oo keliya. Hoteeladani waxay leeyihiin astaamaha ugu muhiimsan ee ah inay yihiin meelo bannaan oo aysan suurtagal ahayn in lala joogo carruurta, si dadka waaweyn ay ugu raaxaystaan ​​jawi habeysan. Waa fikrad in safrayaal badani jecel yihiin inay ka fogaadaan buuqa iyo hudheelada hudheelada ee ay ka buuxaan qoysasku.
ka Hoteellada aan carruurta lahayn waa beddel weyn markay tahay joogitaan, gaar ahaan haddii waxa aad rabto ay tahay xasillooni weyn iyo deegaan asal ahaan qaangaar ah. Laakiin hudheeladani waxay bixiyaan wax intaa ka sii badan, marka lagu daro inay carruurtu xor ka yihiin, iyada oo la siinayo dalab loogu talagalay dadka waaweyn inay ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimada buuxda.
1 Hoteellada dadka waaweyn
2 Hoteellada ku jahaysan lamaanaha
3 Hoteelada xafladaha
4 Adeegyada aan bixin
5 Maxaad u degaysaa hudheelada iyaga oo aan caruur lahayn
Hoteellada dadka waaweyn
Waqtigan xaadirka ah Huteelada dadka waaweyn kaliya ama aan lahayn caruurta waa laga tiro badan yahay, maaddaama aysan matalin wax ka badan 5% dalabkii, in kasta oo ay sii kordhayaan guushoodii ay u sii weynaanayaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray muran badan oo ku saabsan. Waa run in laga mamnuuco qaybta da'da in la joogo ay tahay mid takoor ah ilaa xad oo ay jiraan ururo ka hadlay arrintaas. Laakiin xaqiiqdii ma jiro sharci ka hadlaya waxa hudheeladani diidi karaan ama diidi karaan, sidaa darteed waxay ku ciyaaraan suuq kor u kacaya oo waliba soo kordhaya.
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira aqlabiyad badan oo hoteelo ah oo loogu talagalay qoysaska, gaar ahaan meelaha ugu dalxiis badan, sidaa darteed ma jirin wax dhaqdhaqaaqyo waaweyn ah oo ka dhan ah muuqaalka hudheeladan dadka waaweyn oo keliya, maadaama ay yihiin dad laga tiro badan yahay. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay Facua, si toos ah uma diidi karin soo gelitaanka qoys carruur leh haddii ay doonayaan inay sii joogaan, laakiin waxay noqon doontaa wax aan micno lahayn ma hayaan adeegyada lagama maarmaanka u ah carruurta qaarkood.
Hoteellada ku jahaysan lamaanaha
Noocyada hudheelada badanaa u janjeedha lamaanayaasha, maadaama nasasho iyo jawi jaceyl iyo degenaansho la raadinayo. In kasta oo loo iibiyo sidii meelo xasilloon oo lagu nasto, xaqiiqda ah in dadka waaweyn oo keliya la dejiyo ma damaanad qaadi karto in xasilloonida loo qaato wax iska fudud. Hoteelada loogu talagalay lamaanayaasha sida caadiga ah waxay u fidiyaan tas-hiilaad ay ku nastaan ​​fasaxyadooda iyagoo ku raaxeysanaya adeegyo wanaagsan.
Noocyada hudheelada ee aad ku noolaan karto raadso fiiro gaar ah. Waa wax caadi ah in lagu raaxeysto adeegyada sida dambiilaha soo dhaweynta. Sidoo kale, makhaayadaha waxaa laga helaa menus loogu talagalay dadka waaweyn iyo suurtagalnimada in la cabo cabitaanno khamri ah waqti kasta.
Hoteeladan waxaa caadi ka noqon kara in laga helo meelaha sida isbaaska goobta. Isboortiga loo yaqaan 'spa' waa meel si dhif ah u qaabila carruurta, sidaa darteed ku raaxeysiga dhismaheeda waa wax u gaar ah dadka waaweyn. Daaweynta quruxda iyo nasashada ee la bixiyo ayaa mararka qaarkood loogu talagalay lamaanayaasha sidoo kale. Xirmo ayaa la siiyaa joogitaanka, iyada oo leh dalabyo iyo daaweyn kala duwan. Ma jiraan wax ka fiican in la dhammeeyo nasashada marka loo eego labada lamaane. Dhinaca kale, hudheelka waxaa laga yaabaa inuu leeyahay goobo firaaqo ah sida barkado lagu dabaasho ama jimicsi, sidoo kale loo diyaariyey dadka waaweyn inay ku raaxaystaan.
Fikrad kale oo hudheelladaas aan carruurta haysan ku takhasusi karaan waa tan xisbiga dadka waaweyn. Waxaa jira hudheelo leh dhagaystayaal dhallinyar ah oo bixiya muusig illaa habeen dambe, iyo sidoo kale is biirsaday iyo goobo firaaqo ah. Hoteeladan diiradda ma saarayaan nasashada, laakiin waxay ku fikirayaan madadaalo, sidaa darteed dhagaystayaashoodu waa kooxo asxaab iyo dhalinyaro ah. Waxay kuxirantahay nooca dalab ee ay hayaan, tas-hiilaadkoodu way ka duwanaan doonaan waxaana loo xayeysiin doonaa siyaabo kala duwan.
Adeegyada aan bixin
Huteeladan waxaa lagu gartaa inay bartilmaameedsadaan dhagaystayaasha qaangaarka ah ee xarumaha iyo adeegyadooda. Sidaan dhahno, guud ahaan kama mamnuuci karaan caruurta inay soo galaan, laakiin boosaskooda looma diyaarin. Adeegyo uma hayaan qoysaska, sida daryeelka ilmaha ama adeegga haynta carruurta. Waxay kaloo leeyihiin naadi carruureed, cuntooyinka carruurta, barkadaha carruurta ama jardiinooyin. Ma bixin doonaan sariirro ama waxyaabo kale si ay ugu fududaato joogitaanka qoys carruur leh, maaddaama loo xayeysiiyey inay yihiin goobo ka caaggan carruurta.
Maxaad u degaysaa hudheelada iyaga oo aan caruur lahayn
In kasta oo loo bixiyo meelo nasasho, runta ayaa ah inay yihiin kaliya hudheelo ku takhasusay nooc gaar ah oo dadweyne ah. Kahor intaadan go'aansan mid, waa inaad fiirisaa tas-hiilaadkeeda iyo faallooyinka isticmaaleyaasha kale si aad u hesho fikrado kala duwan. Meelahan ayaa awooda takhasus u leh dhagaystayaal dhallinyar ah, lamaanayaal ama dalxiis raaxo leh ama dalxiis. Sida iska cad, waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin waxa aan raadineyno, maadaama xilligan hoteelada ay u janjeeraan inay diiradda saaraan oo ay ku takhasusaan dhagaystayaal gaar ah si ay u kala soocaan. Sidaa awgeed kor u kaca ku soo kordhaya hudheelada aan carruurta lahayn ama loogu talagalay dadka waaweyn oo keliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Astaamaha hudheelada aan carruurta lahayn
Selva de Oza, dabeecadda iyo dalxiiska